Ceni: voarara ny finday amin’ny latsa-bato… | NewsMada
Ceni: voarara ny finday amin’ny latsa-bato…
Voarara. “Tsy azo atao ny maka sary ao anatin’ny birao fandatsaham-bato (BV). Tsy azo atao koa ny mampiasa finday ao amin’ny trano fisainana”, hoy ny kaomisera eo anivon’ny Ceni, Razafindrabe Ernest. Antony nandraisana izany fepetra izany ny hisorohana ny mety ho fividianana amin’ny alalan’ny vola ny safidin’ny olona. Nohitsin’izy ireo fa hisy ny fanaraha-maso hentitra sy akaiky ireo mpifidy amin’io andron’ny 7 novambra io.
Nantitranterin’ny eo anivon’ny Ceni fa efa voaaro tanteraka ireo biletà tokana hampiasaina amin’ny latsa-bato ka tsy mitombina ny filazana fa efa misy biletà tokana voamarika any ho any. “Tsy misy ahina mihitsy ny momba izany. Tsy maintsy ny biletà tokana ao anaty BV ihany ny hampiasaina”, hoy ihany izy ireo. Nohamafisiny hatrany anefa fa tsy azo ekena ho manan-kery ny biletà tokana raha tsy voasonian’ny mpikambana roa ao amin’ny BV ao an-damosin’io taratasin-datsa-bato io. “Aoka tsy hiditra ao anaty trano fisainana isika raha tsy feno izany fepetra izany”, hoy ny Ceni.
Afaka mifidy ireo tsy manana kara-pifidianana…
Etsy andaniny, afaka mifidy ireo tsy manana kara-pidianana, saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra, araka ny nambaran’ity rafitra mikarakara ny fifidianana ity. “Tsy maintsy maka fanamarinana eny anivon’ny fokontany milaza fa voasoratra anaty lisi-pifidianana ireo tsy manana kara-pifidianana. Tsy maintsy ampiasaina sy entina kosa anefa ny kara-panondrom-pirenena na ny fahazoan-dalana hamily na koa ny pasipaoro fitondra mandeha mivoaka any ivelany”, hoy izy ireo.